Madheshvani : The voice of Madhesh - ‘म उम्मेदवार छु तर मलाई भोट नदिनुस्’
‘म उम्मेदवार छु तर मलाई भोट नदिनुस्’
बीपी साह, केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला)का स्वतन्त्र उम्मेदवार, नेपाल पत्रकार महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न २६ औं महाधिवेशनमा केन्द्रमा ५२ पदका लागि १ सय ६५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि संगठन वा समूहले मधेशी–आदिवासी जनजाति वा सीमान्तकृत समुदायका पत्रकारलाई समेटेका छैनन् । १ सय ६५ उम्मेदवारमध्ये बीपी साह एक मात्र त्यस समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार हुन् जसले खुल्ला उम्मेदावरी दिएका छन् । पत्रकार साह खुल्ला केन्द्रीय सदस्यका लागि देशैभरिबाट मत माग्दैछन् । महासंघलाई समावेशी बनाउने कि असमावेशी निर्णयको जिम्मा देशैभरका १३ हजार १ सय १८ महासंघका सदस्यहरूको हातमा रहेको बताउँछन् पत्रकार साह । विगत १३ वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेका साह आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमै प्लस टुदेखि एमएसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । साह नेपालमा दर्ता हुने पहिलो तथा नेपालकै पहिलो सामुदायिक न्यूजपोर्टल हुलाकी न्यूज डटकमका सम्पादकसमेत हुन् । साहसँग मधेशवाणीका सम्पादक रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० तपाइँको चुनावी एजेन्डाहरू के–के छन् ?
— पत्रकारसँगै पत्रकारिताको विद्यार्थीको नाताले मेरो पहिलो प्राथमिकता पत्रकारिता क्षेत्रकै सम्बद्र्धन–प्रर्वद्धन हो । त्यसैले त पत्रकारिता लागेका पुराना पुस्ताहरूलाई नयाँ प्रविधिसँग साक्षात्कार गराउने र नयाँ पुस्तालाई पत्रकारिता प्रति आकर्षित गराउने अभियान चलाएको छु । त्यसकारण मैले काम गर्दै आएको मिडिया साक्षरता अर्थात मिडिया लिट्रेसी बनाउने अभियान नै मेरो प्रमुख एजेण्डा हो । सँगै पछिल्ला दशकमा पत्रकार तथा पत्रकारितामाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । त्यसकारण पत्रकारलाई जिम्मेवार र पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउदै विश्वसनियता बढाउन धेरै काम गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।
जिल्ला वा देशको कुना काप्चामा काम गर्ने पत्रकारहरू सिक्न पाउने, प्रविधिको उपयोग गर्न पाउने, तालिममा सहभागी हुन पाउने, राम्रो शिक्षा पाउने अवसरहरूबाट बञ्चित छन् । त्यसकारण उहाँहरूलाई प्राविधिक र मैले अध्ययन गरेका विषयहरूको जानकारी दिनु नै मेरो एजेण्डा हो । मैले चलाएका अभियान र एजेण्डाहरूलाई एक कदम अगाडि बढाउन नै म नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा आउन चाहान्छु । होइन भने त पत्रकारिता गरेर, प्रशिक्षण दिएर आरामले जिन्दगी चल्दैछ किन चुनावमा टाउको दुखाउने ? मेरो अभियानलाई एक कदम अगाडि बढाउन मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
० तपाइँ स्वतन्त्ररूपमा केन्द्रीय सदस्य (खुल्ला)का लागि किन उम्मेद्वारी दिनुभएको हो ?
— मेरो जुन राष्ट्रव्यापी अभियान छ, त्यसका लागि म कुनै पदमा गएर वा कुनै पार्टीको संगठनबाट गएर काम गरें भने त्यो त्यति सकारात्मक हुँदैन । मेरो अभियानमाथि अमुक व्यक्तिहरूले अंकुश लगाउन सक्छ । म वा मेरो पत्रकारितामाथि कसैले अंकुश लगाओस् भनेर मैले चाहेको छैन । त्यसकारणले देशैभरका साथीहरूको माझमा पुगु र उहाँहरूले मतदान गरोस् भनेर मैले खुल्लारूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
० नेपालका पत्रकार तथा पत्रकारितामाथि विश्वास घट्दै गएको भन्नुभयो, कसरी ?
— सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि मिडियामा पत्रकारको बारेमा एउटा पनि नकारात्मक समाचार आउँदा भाइरल हुन्छ । अर्थात् पत्रकारमाथिको विश्वसनीयता घट्दै गएको सामान्य मापनको रूपमा त्यसलाई लिन सकिन्छ । अर्को कुरा समाचारमाथि विश्वसनीयता घट्नुको मूल कारण पत्रकारहरू दलीयकरणतिर लागे । राजनीतिक विषयहरूमा लेखिने समाचारहरू पहिले दलको लाइनमा जान्थ्यो तर अहिले नेताहरूको लाइन्मा जान्छन् । हामी कतिपय पत्रकारहरूमा तथ्यांकको ज्ञान नहुनु, प्रविधिको ज्ञान नहुनु वा समाचार स्रोतसम्म सही तरिकाले पहुँच हुन नसक्नुको कारणले पनि हामीले लेखेका समाचार र कन्टेन्टहरू कमशल खालका हुने गरेका छन् । त्यसकारण जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । अर्को मुख्य कारण फ्याक्ट चेकको विषयमा पनि ज्ञानको अभाव देखिन्छ ।
० त्यसो हो भने पत्रकारितामाथि विश्वास कसरी बढाउने त ?
— पत्रकारितामा विशेषज्ञता भएन भने विश्वसनीयता गुमाउने अवस्था छ । सैद्धान्तिक ज्ञान नभएर वा पत्रकारको जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझेर यदि कसैले पत्रकारिता गर्छ भने त्यसले पत्रकारितलाई बदनाम गराउँछ । समाचारीय विषयवस्तु लेख्नुहुन्छ भने तपाइँलाई पत्रकारिताको आधारभूत ज्ञान हुनैपर्छ । पत्रकारिताको आधारभूत ज्ञानको आधारमा लेखिएको समाचारका विषयवस्तु स्तरीय हुनजान्छ । अर्को कुरा, अब पत्रकारले कुनै दलको कार्यालयमा दौडेर मात्रै हुँदैन वा पत्रकार सम्मेलनमा पुगेर मात्रै हुँदैन । पत्रकारले अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यतः म प्रशिक्षणमा जोड दिन्छु । म पत्रकारिता र सोसल मिडियाको प्रशिक्षकको हिसावले प्रशिक्षित व्यक्तिले केही हदसम्म राम्रो गर्छ ।
० महासंघको निर्वाचनमा विभिन्न दलका प्रेस संगठनहरू वा मोर्चाबन्दी गरेर चुनावी मैदानमा पत्रकार होमिएका छन् । तर कसैसँग सहकार्य वा मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छैन, कुनै संगठनमा आबद्ध पनि हुनुहुन्न । किन ?
— सर्वप्रथम त नेपालमा पत्रकारिता कसरी सुरू भयो भन्ने कुरा बुझौं । नेपालमा रेडियो नेपालको स्थापना कांग्रेसीहरूले प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलनताका गरे । गोरखापत्रको स्थापना राणाहरूले आफ्नो चर्चा र कर उठाउनका लागि गरे । भनेपछि यी दुईटै राजनीतिकरणबाट आएको हो नि त । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक नै नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण हाम्रो नेपाली पत्रकारिताको जग नै एउटा राजनीतिकरणबाट सुरू भएको हो । यसलाई राजनीतिको छायाँबाट सहजै हामी हटाउन सक्दैनौं । तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता वा पत्रकारिताकै सैद्धान्तिक पक्षले के भन्छ भने पत्रकारको आफ्नो कुनै दलप्रति आस्था हुनसक्छ तर पत्रकारितामा त्यो देखिनुभएन । पत्रकारिताभित्रको दलीयकरणलाई तोड्नका लागिा हामीजस्ता युवा जसले पत्रकारिताको सैद्धान्तिक पक्षलाई बुझेका छन्, उसले पहलकदमी गर्नैपर्छ र अगाडि आउनुपर्छ । देशभरका महासंघका १३११८ जनाा सदस्यको मनमा हुनसक्छ कि पत्रकारिता स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ, पत्रकारले सबै कुरा समेट्नुपर्छ । तर उहाँहरू बाध्य भएर चुनाव जित्नकै लागि कुनै दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ । तर स्वतन्त्ररूपमा आउन चाहन्छु । यदि म कुनै पार्टीमा गएँ भने मेरो अगाडि त्यो पार्टीका अध्यक्ष हुनसक्छ, प्रेस सल्लाहकारले टाउको खान सक्छ । वा टिकट बाँड्ने बेलामा मसँग विभिन्न खालका प्रतिबद्धता गराउन सक्छ । त्यसकारण त्यो जंजालमा म नफँसेर स्वतन्त्ररूपमा उम्मेद्वारी दिएको हुँ ।
० तपाँइले लामो समयसम्म मधेश र मधेशीलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ । मधेशी कोटाबाट उम्मेद्वारी दिएको तपाइँ जित्ने सम्भावना बढी देखिन्थ्यो नि ?
— मेरो पत्रकारिताको सुरूवात नै करिब–करिब पहिलो मधेश आन्दोलनताका भएको हो । समावेशी, संघीयता, पहिचानका लागि हामीले पत्रकारिता क्षेत्रबाट कलम चलाएको थियौं । जुन पदका लागि मैले लडेँ, सामान्य परिवारबाट एमएसम्मको अध्ययन गरेँ, म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु । तर यस्ता पनि छन् हाम्रो समाजमा जसले आर्थिक अभाव वा विपन्नताका कारण राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सकेन । मैले त्यो समावेशी पद ओगटे भने लक्षित वर्गले नेतृत्व पाउन सक्दैन । किनभने आरक्षण भनेको पछाडि परेकाहरूका लागि छुट्याइएको पद हो । समावेशी र आरक्षणबाट पछाडि परेकाहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने माग उठाउने म पनि हो । मैले माग गरेको पदमा म आफै गएँ भने त्यो त आफ्नो लागि मात्र संघर्ष गरेको देखिन्छ । म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पनि जित्न सक्छु भन्ने लागेर म खुल्ला उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
० एउटा मधेशी भएर खुल्लामा जित्न कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ ?
— म मधेशी भएकोले पत्रकारितामा आएको होइन । म पत्रकार हुँ र मेरो एउटा पहिचान मधेशी पनि हो । अहिले महासंघका उम्मेदवारहरू हेर्ने हो भने खुल्लामा पनि एउटै समुदायबाट आउने, आरक्षणका पनि कतिपय सिटहरूमा एउटै समुदायबाट आउने । यो प्रणाली तोडेनौं भने विकराल बन्दै जान्छ र त्यसले द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । मलाई जति पनि चुनौती सामना गर्नुपरे पनि मूल भागमा जोडिएर परिवर्तन गर्न चाहन्छु । मलाई यो चुनौती पनि लाग्दैन । किनभने महासंघको उम्मेदवारी हेर्ने हो भने देशभरिबाट खुल्लामा म मात्र एउटा मधेशी जसले उम्मेद्वारी दिएको हुँ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा उम्मेदवारी दिएका १ सय ६५ जना मध्ये मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित वा सीमान्तकृतबाट कोही पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा देखिनु भएको छैन । उहाँहरूको संगठन वा पत्रकार समूहहरूले उहाँहरूलाई कोटामा मात्र सिमित राख्नु भएको छ । अव १ सय ६५ मा म एक्लै खुल्ला उम्मेदवार भएपछि राष्ट्रलाई वा पत्रकार महासंघलाई समावेशी देखाउन देशैभरका मतदाताले मलाई मत दान गर्ने छ भन्ने विश्वासमा छु ।
मैले मलाई चुनावमा भोट मात्रै दिनुस् भनेर मागेको छैन । पत्रकार महासंघका १३ हजार १ सय १८ जना पत्रकारहरूले मलाई विश्वास गर्नु हुनेछ र मलाई जिताउनु हुनेछ भने मलाई लागेको छ । म पत्रकार साथीहरूको विश्वास मागेको छु ।